बिद्यार्थीको ढुङ्गा लागेर भक्लक्कै ढले पुलिस ! हेर्नुहोस PN क्याम्पसको कडा आन्दोलनSamachar Pati
बिद्यार्थीको ढुङ्गा लागेर भक्लक्कै ढले पुलिस ! हेर्नुहोस PN क्याम्पसको कडा आन्दोलन
समाचारपाटी, २९ पोखरा । पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाली काँग्रेस समर्थित विद्यार्थी संगठन नेवि संघले निकालेको मसाल जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षप गरे पछि पोखराका पृथ्वीनाराण क्याम्पस गेट अगाडी अाज झडप भएको छ ।
रबि लामिछाने, धुर्मुस सुन्तली, कुलमान घिसिङ सहित एकै पटक १०० जना सम्मानित हुँदै(भिडियो)
समुद्रमा पाइने अचम्मका माछाहरु यस्ता हुन्छन !! हेर्नुहोस
भद्रगोल खेल्नको लागी कपाल नै मुण्डन, भावुक हुँदै खोलिन् आफ्नो जीवन संघर्ष